Sarina bebe kokoa amin'ny Beats Studio Buds, handefasana atsy ho atsy | Avy amin'ny mac aho
Sary maromaro momba ny headphone Beats Studio Buds vaovao no tafaporitsaka an-tserasera, izay azonao jerena amin'ny an-tsipiriany sy mazava ny famolavolana ny boaty sy ny headphones. Amin'io lafiny io, ny famoahana dia avy amin'ny NCC any Taiwan (Database of the National Communication Commission) ka mazava amintsika fa ity no endriny.
Herinandro lasa izay, tafaporitsaka ny sarin'ilay mpilalao NBA malaza Lebron James, miaraka amin'ny kapoakan'i Beats ary sary vaovao momba ireo no miseho eny an-toerana Studio Buds. Ireo headphones ireo dia somary tsy mitovy amin'ny AirPods ary manampy tendron-tsolika toy ny AirPods Pro.
Amin'ity tranga ity, eo amin'ny sary aza dia manampy mpanapaka hahitana ny haben'ireo headphones ireo, toa hoe ankoatr'izay Mampiasà seranan-tsambo USB C ao anaty boaty fitahirizana satria misy tariby misy USB C eo amin'ny andaniny roa hita eo amin'ny sary, ary zava-baovao ity satria ny maodely bitika teo aloha dia matetika no nampiasa seranan-jiro ho famenoana.
Mety ho eo amin'ny talantalan'ny magazay ireo telefaona Beats vaovao ireo ary ireo fanamarinana rehetra efa nandalo sy ireo fivoahana hitantsika tato anatin'ny volana vitsivitsy dia manondro fa vonona ny hanomboka hivarotra izy ireo. Toa ireny headphones sonia hita ambanin'ny elo Apple ireny Navoaka na dia talohan'ny AirPods 3 aza tsaho efa herinandro lasa izay ary toa tsy nisy vaovao momba azy ireo tampoka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » tsaho » Sarina bebe kokoa an'ny Beats Studio Buds, manomboka tsy ho ela